dhaqanka American | khayraadka dhaqanka ka USAHello | USAHello
Baro waxyaabo in la yidhaahdo oo saas yeelo oo aad noqon kartaa edeb ee USA. Akhri wax dheeraad ah
Read oo ku saabsan waxyaalaha aad u muhiim ah in Americans, sida madax-bannaanida, gaarka ah iyo sinnaanta. Akhri wax dheeraad ah
La hadalka iyo hadalka
Americans ka hadlaan hab si toos ah. Taas macnaheedu waxa weeye oo ay idiin sheegaan waxa ay la tahay. Marka aad la hadasho American ah, waxaa muhiim ah in la eego dadka isha. Baro sida in ay ka hadlaan in ay Maraykanka iyo fahmo xidhiidhka American. Akhri wax dheeraad ah
dhaqanka Personal ee USA waxaa laga yaabaa in aad u kala duwan ka badan ee dalka. Read si ay u bartaan oo ku saabsan waxyaabaha ay ka mid nadiif ah sii joogi, sigaarka, iyo shukaansi. Akhri wax dheeraad ah
Haweenka ee dalka Mareykanka
Haweenka ee dalka Mareykanka waa u siman yihiin in ay ragga. Laakiin, waxaa jira siyaabo badan oo dadkii iyo waayo-aragnimada nolosha dumarka way kala duwan yihiin. Read ku saabsan xuquuqda haweenka, dharka, iyo xumaynta dumarkooda. Baro waayo aragnimada haweenka shaqada, guriga iyo caruurta haysta. Akhri wax dheeraad ah
Helitaanka meel aad soo wacdo gurigabishii kowaad ee America noqon karaa mid aad u adag, waayo, dadka cusub. Laakiin wax fiican ka heli wakhtiga iyo dhaqanka. Our qoraaga qaybsada iyada waayo-aragnimo
Yeelasho saaxiibo AmericanYeelasho saaxiibo American. Sheekada Tani waa mid ka mid dhab ah oo ay muujinaysaa waxa u eg yahay dadka shirka ka soo jeeda dhaqamada kala duwan.
The halganka qaxootiga iyo muhaajiriinta ka fool maalmeedkaWilson Kubwayo, qaxooti, qaybsada qaar ka mid ah caqabadaha ugu weyn ee uu u arko dadka cusub. Baro qaxootiga halganka iyo muhaajiriinta maalin walba soo wajaha.